Ị na-ede akara m ga-eme ka akara gị. M na-echepụta aha gị, meekwa gị aha maka gị - Alice | Alice
Ndị na-emepụta na-enye aha dị elu na-akpọ aha OEM
A na-ejikarị akwụkwọ mmado onwe onye, ​​dabara adaba maka ijeri ndụ niile
Ị na-ede akara m ga-eme ka akara gị. M na-echepụta aha gị, meekwa gị aha maka gị - Alice
GA-Ahazi Akara, M ga - eme aa. M na-na -ezie aha '
Na-eyi eji kwadoro Siri Ike na Na Na Na Na Na Na Na Na Naa.
Ebe ọ bụ na Nguzobe Ya na 1998, Alice na Alice Nye Ee Eweghara Ike Gị Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Companylọ ọrụ na-ahụ maka ngwa ngwa ga-ebugharị yeo, IMEe, Space Payment, Sitent Patent na NWAGIM, IHE Ka ọ dị 100,000. NkWado ọ bụla, ọ bụla nye gị EMMAMAMAHAHAHAMAMA NA-EME.
Nmkpọ Okwu mmalite
A na-ekewa ndị na-akpọ aha ha: metal na akpọghị akpọnwụ.
Ngwaọrụ ejiji: ọla kọpa, aluminom, nickel, nerckel, igwe anaghị agba nchara, titanium, zinc alcoy.
Ihe ndị na - abụghị ọla: Abs, pvc, pvc, PLC, Plexiglass, Plexiglass, na Epoxy resin, silicone resin, silicone na ndị ọzọ.
Guzobere na 1998, Alice bụ onye na-emepụta aha aha na ọpụrụiche na R&D, chepụta, mmepụta, ahịa, usoro ọrụ, na ikike ụgha. Companylọ ọrụ ahụ lekwasịrị anya na-enye ọrụ na-akwado ọrụ maka ụlọ ọrụ ụlọ, ụlọ ọrụ igwe, ụlọ ọrụ elektrọnik na igwe elektrọn na ọrụ eletriki na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọ kachasị na-arụpụta igwe anaghị agba nchara, titanium, ọla kọpa na usoro ihe ndị ọzọ ngwaike, na-ekpuchi ihe gụnyere itching, mbipụta ihuenyo, ọpụpụ, oxiding, na-egbu egbu. Na -emepụta oge, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ụdị onyinye onyinye na ihe ọ bụla nke onyinye mgbasa ozi mgbasa ozi na ihe ọ bụla, kaadị ọla edo, kaadị nkesa, wdg. Ruo ugbu a, ọ nwere karịa Ndị ọrụ 100, 1,500 square mita, ma na-ewebata ngwa ọrụ mmepụta ọgbara ọhụrụ. Iji mezuo mkpa asọmpi ahịa ma soro usoro akụ na ụba, n'afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị na-emepe emepe azụmahịa azụmahịa, na-enwe ọganihu mgbe niile na ihe ọhụrụ.
Audio, ngwa ụlọ, friji, kọmputa, ngwaahịa nchekwa
Onye ọrụ nchekwa
Mmiri mgbochi, mgbochi-unyi, njedebe dị elu,
5-8 afọ na iji ya
Ọdịdị dịgasị iche iche
SEDES :: N'ihi na profaịlụ aluminom nwere ike dị mma, ha nwere ike nke ọma na ngwakọta n'efu, ihe nlereanya na ihe ịrịba ama ndị mepụtara ga-amata ọdịdị mgbagwoju anya. , Udiri agba dị iche iche, ma nwee ike iburu ọdịnaya ndị ọzọ.
Mmepụta dị mfe
Usoro mmepụta nke njirimara profaịlụ nke alumini dị mfe. Mgbe onye mmepụta ahụ mechara atụmatụ nke nsụgharị dị ka ihe ndị ahịa chọrọ, a na-egbutu ihe ndị ahịa ahụ dị ka ọkọlọtọ na-ebipụ ma na-akụ ya aka dị ka ihe si dị. Enwere ike ịnzụlite nsụgharị ahụ iji mezue usoro nrụpụta nke ihe ịrịba ama ahụ, enwere ike ịmịcha akụkụ niile.
A: t / t 30% dị ka nkwụnye ego, yana 70% tupu nnyefe. Anyị ga-egosi gị foto nke ngwaahịa na ngwugwu tupu ịkwụ ụgwọ nguzozi.
Ajụjụ: Ọ ga-adị m mkpa ịkwụ ụgwọ ego ọzọ mgbe anyị na-edegharị oge ọzọ?
A: Mba, ịkwesighi ịkwụ ụgwọ maka ebu ahụ, a ga-eji ya mee ihe mgbe niile.
Ajụjụ: Kedu maka mmepụta na oge nnyefe?
A: Oge nlele bụ ụbọchị 7-10 na oge mmepụta zuru oke bụ ihe dị ka ụbọchị iri na ise ka akwadochara ihe osise ahụ.Ọ dabere na ọnụọgụ ịchọrọ.
Ajụjụ: can nwere ike ịhazi ihe ndị ọzọ ahaziri, oem ma ọ bụ ODM?
A: Ngwaahịa dịka ọmụmaatụ ndị ahịa ma ọ bụ eserese imewe, ọnụahịa ahụ bụ naanị, ọnụ ọgụgụ na ogo nke ngwaahịa dị iche, ọnụahịa ahụ ga-adị iche.
Ajụjụ: you na-enye nlele? Enwere m ike ịnweta nlele efu?
A: Ihe nlele na ngwaahịa bụ n'efu maka gị belụsọ gị ewezuga ngwaahịa Arentight.curomid Biko kpọtụrụ anyị ka anyị jiri kpaa nkata.
1.EM ma ọ bụ nke ọfụma.
2.we na-anabata obere iwu / usoro ikpe maka ndị ahịa iji lelee ma ngwaahịa dabara adaba maka ahịa.
3.Lind dị n'ịntanetị na-arụ ọrụ na ọrụ awa 24 maka ụlọ ọrụ a na-akwanyere ùgwù.
4.WO nwere obi uto ịnụ ihe site na gi n'oge na adighi anya na ulo oru ndi gi.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọzọ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Kpọtụrụ anyị E-mail: ahịa03@licelogo.com